I-Semalt Expert: Iingxaki zokhuseleko lwe-WordPress Wonke umntu uyazi
ezininzi iinkqubo zorhwebo kunye neziko zihamba kwi-Intanethi. Ngenxa yoko, i-intanethiintsimi iya kuba yinto ephambili ekujoliswe kuyo kubaphuli be-cyber ukwenzela ukuhlaselwa kwabo. Abanomashishini abaninzi kunye ne-e-yorhwebo umnini-mhlaba akenzibanolwazi olwaneleyo kunye nezakhono zokwakha nokusingatha iiwebhusayithi zabo. Ngenxa yoko, zikhetha iindlela ezifana nezixhobo ze-DIY kunye namaqonga okubambanjenge HostGator. Uninzi lweenkqubo zolawulo lokuqukethwe, abathembele kuzo ziquka iqonga le-WordPress. I-WordPress ibamba i-24% yazo zonkekwiwebhusayithi kwihlabathi. Le meko ithetha ukuba abahlaseli banentambo enkulu yokudlala ukuze bahlangabezane nabachasi babo. Ukufumana inkqubo ye-Hack-prooflidla ngokuba liphupha.
uFrank Abagnale, uMphathi weMpumelelo weMthengi Semalt IiNkonzo zeDivithali, inikeza izizathu zokuba abantu bathanda i-WordPress. Okokuqala, banesiqulatho somthombo ovulekile kunye neefowuni ezininzi, eziphiunokuqhuba imisebenzi emikhulu. Ngenxa yoko, i-WordPress yinkqubo efanelekileyo yokulawula umxholo, eyenza abantu bakwazi ukusingatha iiwebhusayithi ezininzi.Nangona kunjalo, i-WordPress ine-disadvantage. Nangona kuninzi abantu abadala iiwebhsayithi kwi-WordPress, ininzi yesigxina se-hackerKwiiWindowsPress sites. Ngokomzekelo, ukuba i-hacker ifumana umngxuma kwinkqubo yokukhusela ye-WordPress, okanye kwi-plugin etholakalayo kwiWindowsPress,banokukhawuleza ukuzenzela inani elikhulu lokuhlaselwa, elingahambisa ulwazi lomsebenzisi okanye olunye ulwazi oluxabisekileyo kwiindawo ezifihlakeleyo.
Ugaxekile ngabantu abazama ukubethelela amaxhoba ekwenzeni imisebenzi ethile,kodwa injongo yokufihla ayilungile. Ngokomzekelo, abanye abakwa-spammers bazama ukukhohlisa abantu ekunqakrazeni izixhumanisi ezithintekayo. Kwezinyemaxesha, banokuba namaphepha okuphanga, abanika idatha exabisekileyo. Kwiminyaka yanamhlanje, abakwa-spammers basebenzise izinamathiselo, eziqulethei-malware efana neTrojans. Kufuneka ukhuthaze abaxhasi bakho malunga neentlobo zokuhlaselwa. Hackers basemva konke ukuhlaselwa spam. Ba no kwenzekakufuneka iziqinisekiso zomsebenzisi, ulwazi lwekhadi lesikweletu, ulawulo lwewebhu okanye ezinye izisulu ezingcolileyo emva kokuhlaselwa kwabo. Ukusebenzisa amanyathelo okukhuselaisayithi yakho ingayilondoloza ekuhlaselweni amaninzi.
Abahlaseli babantu, i-bots, kunye ne-botnets
Xa uphazamisa ukuhlaselwa kweehack, kubalulekile ukufumanisa ukuba ngubani okanye yintoniemva kokuhlaselwa. Abahlaseli babantu ngabantu bokwenene abenza imisebenzi kunye nenjongo yabo engqondweni. Iibhotshi zisesofthiwe elula njengamarobhothi,omele umntu owenza umsebenzi. Ngakolunye uhlangothi, i-botnet yintanethi ye-bots ezininzi, njengezigidi, ezingathunyelwaukubetha iintlobo ezahlukeneyo kwaye unike iziphumo kwi-hacker endaweni ethile.
Ukhuseleko lwewebhusayithi yakho kunye nolwabaxumi bakho kuxhomekekekakhulu kuwe njengomlawuli. Xa sakha iiwebhsayithi, siyazinyamekela ukusetyenziswa kwezenzo zolwaphulo-mthetho, nto leyo eyenza i-website ye-e-commerce ibe nzimaphantsi. Iinjongo ezininzi ze-SEO zilahleka ezandleni zabagculeli abanceda abakhuphiswano ngokuzisa ukhuphiswano olungenabulungisa. Iimeko ziba nzimangewebhusayithi ye-WordPress, ngokukodwa kuba iinkqubo zabo zokhuseleko ziyaziwa kubo. Ukongezelela, i-WordPress inenani eliphezulu lamasayithi. Abanyezobuchule, ezinokuzikhusela kwi-WordPress zikho kwesi sikhokelo. Unokuqinisekisa kwakhona ukhuseleko lwezithuthi zakho, iindwendwe kunyenjengokuphucula i-SEO ku-Google ngokuhlola ikhuseleko.